Salaamanews » 2013 » January » 04
Home » Dowladda oo Muqdisho ku soo bandhigtay la heystayaal muddo gacanta ugu jiray burcad badeedda Soomaalida
(Salaamanews)-Xukuumadda Soomaaliya ayaa Jimcaha maanta ah Muqdisho ku soo bandhigtay seddex badmaaxi oo gacanta burcad badeedda ku jiray tan iyo sanadkii 2010-kii, xilligaasi oo laga qabsaday xeebaha dalka Soomaaliya.
Ra’isal wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane C/qaadir Faarax Shirdoon, ayaa wariyeyaasha u sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in la soo badbaadiyo badmaaxiyaashan... Tags: warar Galmudug iyo Puntland oo iska kaashanaya amaanka Mudug
(Salaamanews)-Maamullada Galmudug iyo Puntland ayaa ka wada hadlay iskaashi dhinaca amaanka ah oo ay wada yeeshaan labada maamul, waxaana Gaalkacyo ku kulmay madaxweynihii hore ee Puntland iyo madaxweynaha Galmudug.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayay ku kulmeen madaxweynihii hore ee Puntland Jeneraal Cadde Muuse Xirsi, iyo madaxweynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, waxayna isla... Tags: warar Dawladda Soomaaliya oo doonaysa in ay dib u hanato hantidii dibadda
(Salaamanews)-Dawladda Soomaaliya ayaa ka shaqaynaysa qorshe ay dib ugu soo ceshanayso hantidii ay xakameeyeen dawladaha ajnabiga ah iyo hay’adaha taniyo markii ay dawladdii dhexe dhacday sanadkii 1991.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Fawsiyo Yuusuf Xaaji ayaa bilowday safar ay dhawr waddan ku kala tagayso usbuucan si ay u soo diiwaan galiso hantida maaliyadeed ee Soomaaliya ee ku jirta... Tags: maqaallo, warar Mareykanka oo noqday hogaamiyaha la dagaallanka burcad badeedda Soomaalida
(Salaamanews)-Dowladda Mareykanka oo kamid ah dowladaha sida weyn ula dagaallama burcad badeedda Soomaalida ayaa loo doortay hogaamiyaha howlgalka iyo shir gudoonka fadhiga kooxda xiriirka ee sifeynta shufta badeedda Soomaalida.
Kooxda Xiriirka ee la dagaallanka burcad badeedda Soomaalida ayaa u doortay dowladda Mareykanka noqota shir guddoonka kooxda kadib shir ugu soo gabagaboobay magaalada New York
Mareykanka... Tags: warar Puntland oo soo bandhigtay sir ku saabsan Al-shabaab kadib dagaal ka dhacay gobolka Bari
Dagaalka ayaa ka dhacay meel 40-km koofur ka xigta magaaladan Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana la sheegay ciidamo fariisimo... Tags: warar Kooxda Shabaab oo ku dhawaad boqol macallin ku xirtay gobolka Galgaduud
(Salaamanews)-Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in kooxda Al-shabaab ay xirtay culimo badan oo ay ku eedeeysay inay aaminsanyihiin fikirka “Suufiyadda”, ee culimaa’udiinka Ahlu sunnah waljamaacah.
Kooxda Al-shabaab ayaa soo saartay amar lagu xiraayo culimada aan iyaga la shaqeyn waxaana maanta la raafay dhamaan culimadii magaalada Ceeldheere ee gobolka Galgaduud.
Warar lagu... Tags: warar Duqeymaha diyaaradaha aan cidina wadin “Drones” oo daciifiyay awoodda Al-qaacidda
(Salaamanews)-Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka oo jawaab ka ah weerarrada argagaxisadu ay ku heyso dunida, ayaa waxaa ay kordhinayaan beegsiga hogaamiyeyaasha Al-qaacidda, waxaana 24-saac gudahood weerarro lagu dilay hogaamiyeyaal Al-qaacidda ka tirsani ay ka dhaceen wadamada Pakistan iyo Yemen.
Duqeyn xooganeyd oo Khamiistii shalay waqti duhur ah ka dhacday wadanka Pakistan gaar ahan... Tags: maqaallo, warar Xaaladda Syria iyo Ciraaq oo murugsan kadib qaraxyo ruxay wadamadaasi
(Salaamanews)-Qarax gaari loo adeegsaday oo lagu weeraray goob shiicadu ku badantahay magaalada Baghdad ee caasimadda wadanka Ciraaq ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen 27-ruux halka 60-kalena ay ku dhaawacmeen.
Weerar kale oo ka dhacay magaalada waqooyiga Ciraaq ku taal ee Karbala waxaa la sheegay inay ku dhinteen dad kale oo aad u badan, waxaana labada weerarba lala beegsaday shiicada dalka CIraaq.
Weerarrada... Tags: warar Ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia oo weerar ku ah kooxda Al-shabaab
(Salaamanews)-Ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya militaarka Ethiopia, ayaa saaka oo jimcaha weerar ku qaaday xoogaga kooxda Al-shabaab ee ku sugan deegaanno hoostag gobolka Baay ee koofurta dalka Soomaaliya.
Dad deegaanka ah ayaa noo xaqiijiyay in cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda ee dhawaan tababarka loo xiray oo mushaarkoodii la siiyay ay u ruuqaansadeen jiidaha dagaalka ee kooxda Al-shabaab... Tags: warar Daawo: Dhibaatooyinka heysta dhallinyarada Islaamka
(Salaamanews)-Waa markale iyo xubinteenni umuuraha Islaamka, maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa hadii uu rabbi raali ka noqdo dhallinyarada caalamul islaam gaar ahaan dhallinta Soomaalida dhibaatooyinka heysta.
Muxaadiraddan waxaas oo jeedinaya rabbi ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin ha siiyee fadiilatul Sheekh Mustafa Xaaji Ismcaaiil Haaruun, wuxuuna eegi doonaa dhibaatada heysata dhallinyarada... Tags: islam Next »	Soo Dhaweenta Faqi Bashir Abdulle Osman MPLS MN	Daawo muuqaallo kale	Maqaallo »